Imihlahlandlela yokusetshenziswa kwamakhamera we-body-Worn | Izixazululo ze-OMG
Lolu cwaningo luhlose ukuthola imihlahlandlela yokusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngomzimba kuma-Element Engency Engency. Kwenzelwe ukusekela ama-Element Engency Enjensi Yomthetho ekwakheni izinqubo nezinqubomgomo ezibusa ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngomzimba. Lo mbhalo wemihlahlandlela uphathelene nokusetshenziswa okusobala kwamakhamera agqokwa ngomzimba asetshenziswa ngenxa yomphakathi nangokuqonda ukuthi umphakathi wazisiwe ngokuthunyelwa kwawo.
Ngaphandle kwezidingo ngaphansi kwemiyalelo yokuvikelwa kwemininingwane yomuntu, ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngomzimba kungahlobanisa okunye ukuphoqelelwa lapho ama-Element Engency Athente kudingeka aqaphele.
Isibonelo, amakhamera agqokwa ngomzimba angaqopha izithombe zevidiyo, imisindo nezingxoxo ngenani eliphakeme kakhulu lucidity. Ngakho-ke, kungahle kube nezinkinga ezengeziwe eziphakanyisiwe uma ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa uMzimba kunoma yisiphi isimo esinikeziwe kulindeleka komphakathi kokucabanga kobumfihlo noma kwakha ukuxhumana kwezokuxhumana okuyimfihlo, kufaka phakathi izindawo ezifinyeleleka kumalungu omphakathi. Ama-Element Engency Engency futhi adinga ukunaka eminye imithelela engokomthetho noma nini lapho izithombe nezandi ziqoshwa ezindaweni zangasese, njengasekhaya noma ezimotweni zabantu.
Amakhamera Worn Worn nobumfihlo:
Ama-camera-Worn Camera angamadivayisi aqopha okwenzelwe ukugqokwa umfaniswano wezikhulu zomthetho, ongafaka isigqoko noma izibuko. Banikeza irekhodi elibonakalayo elilalelwayo lemicimbi ngokubuka kwesikhulu lapho izikhulu zenza imisebenzi yazo yansuku zonke. Imvume yezithombe eziedijithali ezinesinqumo esiphakeme sokubuka okusobala kwabantu futhi ifanelekile kusetshenziswa isoftware analytics software, njengokuqashelwa kobuso. Ama-Microphone ayemukeleka ngokwanele ukuqopha hhayi imisindo ehlobene nesimo okuqondwe ngaso kuphela kodwa futhi nomsindo oqondile ongafaka izingxoxo zababukeli.
Ubuchwepheshe bamakhamera we-Body-Worn Camer's sibonisa ukwanda okukhulu kokushayisana kusuka ezinsukwini zokuqala zamakhamera amisiwe lapho izinhlelo ze-CCTV bezisemukelwa kabanzi futhi zazikwazi ukuqopha izithombe futhi zingazwakali. Ngaleso sikhathi, amahhovisi amaningana okushiya ubumfihlo baseCanada akhiphe imihlahlandlela yokubukwa kwamavidiyo emkhakheni womphakathi, oqala ekugcineni kwale dokhumenti. Ngenkathi izimiso eziyisisekelo zobumfihlo eziseduze nokubukwa kwevidiyo zihlala zifana, imvelo manje isisungule kakhulu. Njengoba ubuchwepheshe bokubuka bukhula, amanani avela njalo emininingwane yomuntu siqu (kokubili ividiyo nomsindo) ayaqoqeka ezimweni ezihlukahlukayo (zombili zamanje nezeselula) ngensimbi yokuxhunyaniswa neminye imininingwane yangasese (isib. Ukubonwa kobuso, imethadatha). Kuyabonakala ukuthi ama-LEA angafuna ukukuthatha ukusebenzisa ubuchwepheshe obusha ukubasiza ekwenzeni imisebenzi yabo. Ngasikhathi sinye, kepha ubuchwepheshe be-BWC buveza ukufakwa okubucayi kwelungelo lomuntu ngamunye lobumfihlo. Sikholelwa ukuthi ukulungisa izinqumo zobumfihlo kusukela ekuqaleni kungavumela ibhalansi efanelekile ukutholakala phakathi kwezidingo zokusebenzisa umthetho kanye namalungelo wobumfihlo abantu.
Amakhamera ethu Worn Worn azoba yisisombululo esisebenzayo sezidingo zokusebenza esezikhonjisiwe? Ama-LEA kufanele alalele imikhawulo yobuchwepheshe. Izici zesimo zingahle zivele kububanzi bekhamera, ukuqoshwa komsindo kungahle kungapheleli ngenxa yohlu lweracket yangemuva, noma iphutha lomuntu lingabeka phansi usizo lwezinto ezirekhodiwe futhi zinciphise ukusebenza kwazo. Uma ukuqoshwa kwenzelwa ukuthi kusetshenziswe njengobufakazi ezenzweni zasenkantolo, ama-LEA kufanele athathe izidingo ezikhonjwe yizinkantolo zokwamukela okurekhodiwe njengobufakazi kanye nezindlela zokuqoqa ubufakazi nezindlela zokugcina ezelulekwa ukwenza isiqiniseko sokuthi lezo zidingo ziyagculiseka.
Ngaphandle kokusola, ukusetshenziswa kwama-BWC kuzoholela ekulahlekelweni kobumfihlo ngoba ukuqopha izingxoxo nezenzo zabantu kuyimfihlo yobumfihlo ngasese. Njengoba kunje, noma yikuphi ukuphazamiseka kobumfihlo kumele kuncishiswe kufinyeleleke ngangokunokwenzeka futhi kubhekane nezinzuzo ezinkulu nezingabanjwa. Ngobuchwepheshe obusha, kungahle kube nzima ukubikezela uhla oluphelele lwemiphumela emihle nengalungile ekuphoqelelweni kwansuku zonke kanye nomphakathi okhonzwayo. Ukwenza iphrojekthi yokushayela izindiza kunconyelwa kakhulu njengendlela enengqondo yokuhlola imiphumela yobumfihlo bamakhamera we-Body Worn mayelana nezinzuzo zawo, ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuthi azihlelele noma cha, noma zingaki, futhi ngasiphi isimo.
Ukucatshangelwa kokugcina ukuthi ngabe isilinganiso esilinganisayo sobumfihlo esingavikela izinhloso ezifanayo. Ngenkathi kungahle kube necala lebhizinisi lohlelo lweCamera-Worn Camera, izindlela ezingavamile kufanele zibhekwe ukubona ukuthi zingakwazi yini ukubhekana nezidingo ezanele ngokushayisana okungathandeki kubumfihlo. Isilinganiso esilinganiselwe sobumfihlo esinqunyiwe ukukhetha okukhethiwe.
Ukuhlolwa Komthelela Wobumfihlo:
Njengomsebenzi omuhle kakhulu onconywe kakhulu, kufanele kuhlolwe ubumfihlo bokuhlola (i-PIA) yangaphambilini kusetshenziswe Amakhamera we-Body Worn ukusiza ukubona ubungozi obumfihlo bohlelo lweCamera-Worn Camera. I-PIA ingaba yigugu ekusizeni ama-LEA aqede kulezo zingoti noma azinciphise ziye ezingeni elifanele. Isibonelo, kungahle kube nokucatshangelwa okwengeziwe, okufana nohlaka nezinzwa zesiko okufanele kucatshangelwe ekunqumeni ukuthi zingawasebenzisi ama-BWC ezimweni ezibucayi. I-PIA kufanele ibe nohlelo lokubonisana futhi luhehe nomphakathi lapho ama-BWC ezosetshenziswa khona.
Ama-Element Engency Enhlangano futhi angabheka usizo lochwepheshe babumfihlo ngaphambi kokusebenzisa uhlelo lwamakhamera we-Body-Worn Camera. Ochwepheshe babumfihlo bangagxeka ukusetshenziswa okuhlongozwayo kwamakhamera we-Body-Work Camera emphakathini ukuze aqiniseke ukuthi noma yikuphi ukuhlanganiswa nokusetshenziswa kwemininingwane yomuntu siqu kwenziwa ukusekela izibopho ngaphansi komthetho wobumfihlo.
Ubumfihlo babasebenzi kufanele futhi bunakwe. Amakhamera we-Body-Worn Camera angathatha imininingwane yezikhulu eziqinisa umthetho ezigcinwe ngaphansi kwemithetho yobumfihlo eminingi yomkhakha kawonkewonke. Izindawo ezingase zingasebenzi zihlanganisa ukusebenzisa ukuqoshwa kweCamera-Worn Camera ukusekela ukuhlolwa kokusebenza kwabasebenzi. Abasebenzi futhi bangaba namalungelo obumfihlo ngaphansi kweminye imithetho nezivumelwano ezihlangene ezingaba nomthelela kuhlelo lwe-BWC.
Uma ukusetshenziswa kokuqoshwa kubhekwa kunoma yimiphi imisebenzi engeza izinhloso eziphambili zohlelo lweCamera-Worn Camera, isibonelo, ukuhlola ukusebenza, ukuqeqeshwa kwamaphoyisa, noma ucwaningo, lezi zinhloso zesibili zidinga ukubukezwa ukuze kuqinisekwe ukuthi kulandelwa umthetho ofanele, futhi abasebenzi kudingeka baziswe kahle ngabo. Futhi, izindlela kufanele zakhiwe ukumisa umngcele wobumfihlo, njengokufinyiswa kobuso nanoma iziphi izinhlamvu ezikhomba futhi ungafaki ukuqoshwa kokuqukethwe okubucayi.
Isisekelo sokuphamba ama-BWC, okubandakanya izidingo zokusebenza nezinhloso zohlelo.
Iziphathimandla zezomthetho zokuqoqa imininingwane yomuntu ngaphansi kohlelo.
Iqhaza nezibopho zabasebenzi maqondana namakhamera we-Body-Worn Amakhamera nokuqoshwa kwabo.
Izindlela zokuqoshwa ezingaguquki zomongo eziqondile futhi zivule futhi zivule ama-BWC, kufanelekile.
Ukuhlinzekela umhlahlandlela olungiselelwe kanye nokuqeqeshwa kwabasebenzi ukuze uqiniseke ukuthi izikhulu ziyakwazi ukufakwa kwamfihlo kwamakhamera we-Body-Worn Camer futhi zazi izibopho zazo ngaphansi kwalezi zinqubomgomo nezinqubo.
Onogada babumfihlo babasebenzi abanemininingwane yabo siqu ithunjwa ngamakhamera we-Body-Worn Camera.
Ukwabiwa kwesibopho sokuqinisekisa ukuthi izinqubo nezinqubo zekhamera ye-Body-Worn Camera ziyalandelwa, kukho konke ukuzibophezela kuphumule nenhloko yenhlangano.
Izindleko zokungahloniphi izinqubomgomo nezinqubo.
Ilungelo lomuntu ngamunye lokuthola usizo. Abantu kufanele baziswe ukuthi banelungelo lokukhononda kumgwamanda wephutha lobumfihlo bama-Ejensi Enhlangano Yezokuphathwa Komthetho maqondana nokuphathwa kokurekhodwa okuphethe imininingwane yomuntu ukunquma ukuthi ngabe kwephulwe yini umthetho wobumfihlo.
Isibopho sokuthi noma yiziphi izivumelwano phakathi kwama-Element Engency ejensi kanye nabahlinzeki benkonzo yesithathu zihlonza ukuthi ukuqoshwa kufakwa ekuphathweni kwe-Ejensi Yokuqinisa Umthetho futhi kungaphansi kwemithetho yobumfihlo efanelekile.
Isibalo sokucwaningwa kwamabhuku kwangaphakathi okujwayelekile kohlelo lwe-Body-Worn Camera ukubhekana nokuhambisana nenqubo, inqubomgomo, kanye nemithetho yangasese esebenzayo. Ukucwaningwa kwamabhuku kumele kube nokubuyekezwa kokuthi ukubonwa kweCamera-Worn Camera kungasalungiswa yini ngezinhloso zohlelo.
Kumandla enqubomgomo ye-PIA, ukuhlinzekelwa kwama-PIAs noma nini lapho kunezinguquko ezibalulekile ohlelweni.
Igama nemininingwane yokuxhumana yomuntu engaphendula izimpendulo ezivela emphakathini.
Izimo okungaqashwa ngaphansi kwazo. Ukubuka kufanele kwenzeke kuphela esisekelweni sokwazi. Uma kungabazeki ukuthi kukhona okungekho emthethweni okwenzekile futhi akukho zinsolo zokungaziphathi kahle, ukuqoshwa okungafanele kubhekwe.
Izinhloso zokuqoshwa zingasetshenziswa kanye nanoma yiziphi izimo noma imikhawulo enomkhawulo, ngokwesibonelo, kushiya okuqukethwe okubucayi kusuka kokuqoshwa kusetshenziselwa izinjongo zokuqeqesha.
Imingcele echaziwe ekusetshenzisweni kwevidiyo nokuhlaziywa komsindo.
Izimo lapho ukuqoshwa kungambulwa khona emphakathini uma kukhona, kanye nemikhawulo yokuvezwa okunjalo. Isibonelo, ubuso kanye nezimpawu zokuhlonza zabantu besithathu kufanele zifiphale namazwi asonteke lapho kungenzeka.
Izimo lapho ukuqoshwa kungadalulwa ngaphansi kwenhlangano yangaphandle, okufana nezinye izinhlaka zikahulumeni ophenyweni olunempilo, noma izisebenzi zomthetho njengengxenye yokuthuthukiswa kokutholwa kwenkantolo.
Ukufingqa ikhamera, amakhamera agqokwa ngomzimba anenzuzo enkulu kanye nakho konke ukwehliswa kwayo akugcini nje ngokurekhoda ukukhuluma nezenzo zomuntu oyedwa kepha futhi nokuzibandakanya kwabantu abathile phakathi kobubanzi bokuqoshwa, kufaka phakathi amalungu omndeni, ababukeli, abangane, abasolwa, kanye nezisulu. Ukuqoshwa kwabantu ngokusetshenziswa kwamakhamera agqokwa uMzimba kuphakamisa ubungozi obukhulu ngasese, futhi Ama-Element Engency Atigation kumele anikelwe kuphela ekutholeni amakhamera we-Body-Worn ukuze afike ezingeni nangendlela evikela futhi ehlonipha umphakathi kanye nabasebenzi jikelele ' ilungelo lobumfihlo lomuntu siqu.
Imihlahlandlela yokusetshenziswa kwamakhamera omzimba igcine ukuguqulwa: I-December 10th, i-2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-4319 Ukubuka kwe-1 Namuhla